Imirikiti ndị ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ anaghị aga ịghọ ndị na-eguzosi ike n’ihe. Eleghị anya ha na-achọpụta ọtụtụ, ọbụna ọtụtụ narị weebụsaịtị na nke a, ọ dịkwa mwute na ọ dị mfe fechefu nke gị mgbe ha gụsịrị ya – ọ gwụla ma ị na-eso ha.
Nwere ike iche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa gị nwere mmasị. Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ojiji ya, mana ọ bụrụ na ị na-ewuli ndị na-ege gị ntị na-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa blog gị, ọ pụghị ịkatọ email.
Email nwere ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa da. N’aka nke ọzọ, email na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ọ gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
Na faqe na email, ị gaghị enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ụgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Ọ bụ ya thjesht ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1.1 1 – Email wedị Nwepụ
3 Ngarkesë Autoresponder
4 Malite mepụta Ntọala Gị Taa
N’ụzọ doro anya, iji mee ego site bụla site na email gị autoresponder, a ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
Mana ọ bụghị naanị ndị debanyere aha ụ bụla – naanị ị chọrọ ndị debanyere aha ndị nwere mmasị na ihe ị nwere inye. Ọ dị mkpa ilekwasị anya mgbalị gị na ịmepụta listi àgwà ndị na-agụnye ndị na-ege gị ntị.
1 – Email wedị Nwepụ
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta bụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. N’ebe a WHSR, sidoqoftë Ninja Popup. Tani ju jeni gati në internet Popups në CodeCanyon. Ịdo-na-akwado OptinMonster, një WordPress në internet me një vlerësim të plotë mmepụta mara mma ọpụpụ na ụdị ụdị.
Usoro a na-ewu ewu iji nweta ndị zọ debanyere aha email bụ site n’inye ya freebie, dịka akwụkwọ e-akwụkwọ ma ọ bụ ozi email, nye ndị debanyere aha ọhụrụ.
Pat Flynn nke Të ardhura pasive inteligjente na kontakton me faqet e internetit në faqen kryesore të Bluehost na LeadPages.
Email Iba chebaa gị autoresponder, a ga-achọ ihe ị ga-ere.
Njikọ njikọta bụ ọzọ a na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta email. Ị nwere ike iji weebụsaịtị dị ka Na-ere ahịa ịchọta njikọ mmekọ mmekọ, ma ọ bụ soro ya na ụdị ndị ị na-eji ndị nwere mmemme mmemme, dị ka gị ụlọ ọrụ weebụ.
I nwekwara ike inweta ego site n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide na-enweta ego ị na-enweta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị zuru ezu, n’enweghị ọr aakaa të miratuara nga qeveria.
Otú ọ dị, a ga-ahapụ ọzọ meghere maka ahịa na email ọ bụla. Ọbụna ozi ịntanetị gị nwere ike ijikọta na saịtị gị, ebe ndị bịa nwere ike ịchọta njikọ ịzụta ngwaahịa gị ma ọ bụ pịa njikọ njikọ gị.
Maka ihe kachasị ego, nye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naanị n’ihi na email gị nke na-ere ihe $ 500 adịghị arụ ụrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. Gbalịa ịgbasa usoro ntanetị gị iji nye otu obere ihe 50 $.
GetResponse bụ ngwá ọrụ ahịa ahịa anyị a akwadoro na nnukwu elektrwasw anya na ndị na-emepụta ihe. Ha anọwo gburugburu karịa afọ 15. Anyị na-eji ya ịmepụta, zipụ, ma soro akwụkwọ akụkọ email na ndị debanyere aha Anyị na ọnụahịa dị ụnụ. Lelee Ntụleghachi nke Jerry GetResponse chọpụta ihe.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi email nke na-agụnye njirimara na-arụ ụrụ. Na na-enyekwa ngwá ọrụ email na-email ka ndị na-debanyere aha gị nwere ike ịnweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi email na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha maskara). MailChimp na-enye ngwá ụrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. Site na ngwa ngwaọrụ ha, unë nwere ike ịmepụta ọtụtụ Ozi ịntanetị maka NDI debanyere aha ọhụrụ, ma O bu ọbụna tinye Ozi ịntanetị Ka një zitere mgbe IAL ụfọdụ mepụtara (di Katundi izipu kupon mgbe Onye Ahia zụtara ngwaahịa).
Malite mepụta Ntọala Gị Taa
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịtụbeghị oge! Faqja Bido na banye maka ntinye akwụkwọ nhọrọ email gị, na debe ụfọdụ nwepu aha na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ozugbo i nwere echiche nke ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-ahụ n’anya.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azụmahịa ndị dị nanị.